Madaxweyne Gaas oo sheegay in dowlada Soomaaliya ay ku fashintay hirgelinta nidaamka federaalka
Madaxweynaha maamulka Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa xalay khudbad dheer ka jeediyey munaasabad lagu maamuusayey sanad-guuradii 16aad ee ka soo wareegtay aasaaskii Puntland, taasoo lagu qabtay magaalada Garoowe.
C/wali Gaas ayaa ku dheeraaday marxaladihii uu soo maray maamulka Puntland mudadii 16ka sano aheyd ee uu jiray, waxyaabaha sababay sameynta maamulkaas iyo guulaha uu ka gaaray nabad ku soo dabaalida iyo horumarka degaanadaas.
Waxaa uu si gooni ah uga hadlay C/wali Gaas mudadii koobneyd ee uu maamulkiisu jiray iyo waxyaabaha illaa hadda u qabsoomay, isagoo xusay iney maamulkiisa isbedel balaaran oo la taaban karo u horseedi doono shacabka Puntland.
Mar uu soo hadal qaaday xaaladaha kale ee dalka ayuu sheegay C/wali Gaas in dowlada Somalia ay si cad ugu fashilantay mudadii ay jirtay hirgelinta nidaamka federaalka oo buu yiri ka mid ah waajibaadka dastuuriga ah ee laga doonayey iney gudato, isagoo taa bedelkeedna ku eedeeyey madaxda dowlada iney ku tunteen dastuurka.
Mar uu soo hadal qaaday xiisadaha dhinaca xadka ee maamulkiisa kala dhexeeya Somaliland ayuu sheegay in Puntland aysan marnaba gorgortan ka geleynin dhulkeeda, isagoo saraakiisha ciidamada Puntland ugu baaqay iney qaadaan talaabo dib loogu soo celinayo degaanada maamulkiisa ka maqan.